TringMe Cheap International Calls: How to Make Cheap International Calls to Zimbabwe
The best way to make cheap international calls to Zimbabwe is VoIP calls and for the best VoIP calls you can use TringMe. With TringMe you can make cheap calls to Zimbabwe from just 8.9 cents per minute, which is a lowest international calling rate in the industry.
With TringMe, you can make cheap international calls to Zimbabwe from the Website and TringMe app for Android and iPhone.
To call Zimbabwe from TringMe App
Once credit added into your account, Just click on the contact or use dialer pad to dial the number starting with Zimbabwe country code you wish you call to.
To Call Zimbabwe from TringMe website
Once credit added in your account, just add contact or dial number starting with Zimbabwe country code you wish call to.
Apart from Zimbabwe you can call to more than 200 countries with cheap international call rates from TringMe.
Posted by TringMe at 05:46
Labels: cheap calls to Harare, cheap calls to Zimbabwe, Harare, international calls from Zimbabwe, international calls to Zimbabwe, viop calls to Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe calling rates